Wakhtiyaddii Dugsiga Sare Iyo Ciyaaraha – Fariinta Maanta Ee Dhalinyarada (WQ: Jamaal Cali Xuseen) - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Wakhtiyaddii Dugsiga Sare Iyo Ciyaaraha – Fariinta Maanta Ee Dhalinyarada (WQ: Jamaal Cali Xuseen)
January 12, 2021 at 21:58 Wakhtiyaddii Dugsiga Sare Iyo Ciyaaraha – Fariinta Maanta Ee Dhalinyarada (WQ: Jamaal Cali Xuseen)2021-01-12T21:58:03+02:00 ARRIMAHA BULSHADA, MAQAALLADA
Sawirka aad halkan ka aragtaan waa Jamaal Cali Xuseen oo 17 jir ah dhigtana dugsiga sare ee Faarax Oomaar (Secondary School) ee ku yaalla magaaladda Hargeysa. Waa sideetamaadkii. Magaaladda Hargeysa waxay ka soo kabanaysey kacdoonkii dhalinyaradda ee dhagaxtuurka ee February 1982 kii ka dhacay magaaladda. Inkastoo ay siyaasadda dalku ay cakirneyd oo jabhadihii dalka ka bilaabmay ee SNM iyo SSDF ay dardar wadeen, weli dalku wuu xasiloonaa ilaa xad. Tartankii xiisaha badnaa ee ciyaaraha goboladda ee sanadkiiba hal mar la qaban jiray wuxuu ahaa mid xamaasad weyn leh oo aad loo xiiseyn jiray. Sawirka iyo maqaalkan maantuba ujeedadda ka danbeysa iyo fariinta ay gudbinayaan wuxuu isugu jiraa dhiirigelin jiilkan maanta ah iyo xusuusta taariikhdii la soo maray iyo siday u ahayd aniga iyo jiilkayga magaaladda Hargeysa.
« Nafiisa Yuusuf Maxamed: Shakhsi calanka u sidda ololaha xuquuqda haweenka ee somaliland
Soomaaliya kadib Carta: Kaalinta Maqan ee Hoggaamineed (WQ: Cabdifataax Xasan Maxamed “Barawaani”) »